Budata Free GIF Frame Maker maka Windows
Budata Free GIF Frame Maker
Free Budata maka Windows (8.13 MB)
Budata Free GIF Frame Maker,
GIF animations bụ otu nime ihe ndị kasị atọ ụtọ ngwá ọrụ nwere ike iji na-ebuga ihe anyị chọrọ ịgwa ma anya na mfe, na nihi nke a, ọchịchọ ha na-amụba na-adịbeghị anya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmegharị foto ndị ị kwadobere wee mee ka ha pụta ìhè karịa, ị nwere ike iji GIF Frame Maker efu.
Ihe omume a na-enyere gị aka ịgbakwunye animation na ihe oyiyi dị ugbu a kama ịhazi foto ozugbo notu notu na ịme GIF animations, ọ nwere ike ịchekwa ya dị ka GIF. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ iji akara ngosi na foto a kama ịmegharị ihe nkiri, ị nwere ike ịnwale mmemme ahụ.
Ihe omume a, nke nwere ọtụtụ mmetụta na okpokolo agba dị iche iche, a na-enyekwa ya nefu ma nwee interface dị mfe iji. Ihe nkiri dị nime ezukwara ọtụtụ ndị ọrụ afọ ojuju. Iji wepu watermark na foto, ịkwesịrị ịmepụta akaụntụ Viscom.
Free GIF Frame Maker Ụdịdị
Nha faịlụ: 8.13 MB